थाहा खबर: कर्मचारीतन्त्र र सरकार भित्रैबाट संघीयतालाई खतरा
कर्मचारीतन्त्र र सरकार भित्रैबाट संघीयतालाई खतरा
काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता नेपाल सरकारसँग नभएको आरोप लगाएका छन्।
संविधानको मर्मविपरित संघीय प्रहरीको शाखाको रुपमा प्रदेश प्रहरीलाई स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनले संविधानको सही कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकार र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
'मूर्तिचोरहरुले सत्ता पल्टाउन खोजे भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । को हो त्यो ? दुई दिन अगाडि बालुवाटारको बैठक गर्ने क्रममा विप्लवहरु र राजावादीहरुले व्यवस्था परिर्वतन गर्न खोज्दैछन् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसले के देखाउँछ भने देशको राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर छ', उनले भने, 'यो संघीयता र गणतन्त्र जस्ता नयाँ चिजहरु उल्टाउने दुश्प्रयत्नहरु कहीँ न कहीबाट भइरहेको छ।
यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले गणतन्त्रको कार्यान्वयनप्रतिको त्यो डिग्रीको गम्भीरता हुने कि नहुने ? छैन गम्भीरता।' कर्मचारीतन्त्र र सरकार भित्रैबाट पनि संघीयतालाई खतरा रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर हुन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय पुरानो साईकल चलाइराखेकालाई नया साइकलको बानी नपरे जस्तै भएको टिप्पणी गरे।प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्‍नु अनुमान गर्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै उनले सबैतर्फ योग्यतामा समरुपता कायम गरेर प्रदेश प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेकपा स्थायी कमिटी आज
हावाबाट कोरोना भाइरस सर्ने प्रमाण भेटियो : डब्लुएचओ
लकडाउनमा घुम्ती टोलीमार्फत पढाइ
अमेरिकामा एकै दिन ५५ हजार भन्दा बढी संक्रमित थपिए
झुलाघाट नाका आजदेखि खुल्ने